5 nuuc ee ragga oo dumarku ay jecelyihiin | Raganimo University
5 nuuc ee ragga oo dumarku ay jecelyihiin
July 23, 20193 minutes
Dumarka horta rag nuucee ah ayay jecelyihiin? Waxaa rag badan ay qalad ka aaminsanyihiin nuuca ragga ay dumarku jecelyihiin. Qaar ayaa u haysata in dumarku ay jecelyihiin ninka murqaha weyn, sariirta cajiibka ku ah, ninka dheer, midka taajirka ah, balse xaqiijadu sidaa ma ahan.
Halkaan waxaan idinkugu soo bandhigaynaa 5 nuuc ee ragga kuwaasoo dumarku ay jecelyihiin.
Ragga xigmada leh
Xigmadu ma ahan wax la cabiri karo, ma ahan aqoon iyo shahaadooyin balse waa ninka caqliga badan, wax fahansan, ku hadla hadal qiimo leh oo wax laga faa'idayo. Dumarku waa jecelyihiin ninka wax u kordhin kara oo ay saacado badan sheeko la wadaagi karaan iyaga oo aan ku caajisin. Ragga nuucaan ah soo jiidasho gaar ah ayay leeyihiin.
Muhiimadu waa in aad tahay nin xaalada aduunka ka war-qaba, xigmad leh, safray, wax laga kororsan karo. Haddii aad tahay nin aan kalsooni isku qabin, aan waayo aragnimo lahayn. Ma fiicna in aad iska dhigto nin xigmad leh. Xigmadu ma ahan wax loo dhasho ee waa mid la kororsado.
Ragga baashaalka ku fiican
Haddii aad gabadh ka qoslin karto, waa calaamada ugu fiican ee aad ku kasban karto. Haddii aad tahay nin kaftanka ku wanaagsan, oo dadka ka qosliya, oo aan lagu caajisayn agtiisa waxaa hubaal ah in aysan dumar la'aan kugu dhaceyn. Sidoo kale haddii aad tahay nin soo dhaweynta ku fiican, oo markasta ka fikiraya waxyaabo xiiso leh oo asxaabtiisa iyo gacalisadiisa ka farxiya sameynaya, sidoo kale waa ragga soo jiidashada leh.
Ragga guusha ka gaaray nolosha
Waxaa laga yaabaa in aad ogtahay in ragga caanka ah sida atoorayaasha, wariyaasha, ganacsatada magaca leh iwm ay yihiin kuwo soo jiidasho leh. Xitaa haddii ay yihiin kuwo aan qurxooneyn. Sababtu waa guusha ay nolosha ka gaareen. Haddii aad tahay nin ku wanaagsan hawshiisa, xitaa haddii aad tahay arday jaamacada waxbarashada laga dambeeya waxaad noqonaysaa mid soo jiidasho leh. Ragga hamiga leh, kalsoonida leh, oo nolosha guul ka gaaray ama ku socda wadadii guusha gabdhahu waa jecelyihiin. Muhiimadu ma ahan lacagta, ee waa hamigaaga iyo hawl-karnimadaada.
Ragga deeqsiga ah
Dadka qaar badan ayaa qalad ka aaminsan ragga taajiriinta ah, iyagoo u maleeya in dumarku ay jecelyihiin ragga taajirka ah oo keliya. Sidaa ma ahan xaqiiqadu. Dumarku waxay jecelyihiin ragga deeqsiga ah, xitaa haddii uu yahay faqiir, muhiimadu waa in uu leeyahay niyad iyo wadno diyaar u ah in uu la wadaago inta yar ee uu haysto dadka kale. Lacagta keliya ma ahan deeqsimadu, xitaa naxariista, daryeelka, danqashada iwm ayaa deeqsi ku noqon kartaa.
Ragga caafimaadkooda ka shaqeeya
In aad caafimaadkaaga ka shaqayso ma ahan oo keliya in aad jiimka aado oo aad murqo yeelato. Muhiimadu waa in aad tahay nin ka taxadara caafimaadkiisa, nin jimicsi sameeya, cunto fiican cuna, hurdo fiican seexda, ka fogaada daroogada, sigaarka iyo balwada. Raggaas dumarku waa jacelyihiin.
Sidoo kale caafimaadku waxa uu noqon karaa in aad tahay nin ka adag dareenkiisa niyada oo aan durbadiiba calaacal iyo oohin la dhicin marka ay la soo daristo xaalad adag.